Kaaliyaha Hoyga ee Xiaomi - SmartMe
Dom » Ku keydi qeybta 'Caawiyaha Guryaha'
Qaybtaan waxaad ka heli doontaa dib u eegisyo, hagitaanno iyo dhammaan waxyaabaha ku saabsan teknolojiyada kaaliyaha guryaha. Baro wax badan oo ku saabsan aaladda 'Xiaomi Aqara' iyo kuwa kale oo badan, kuwaas oo kuu oggolaanaya inaad ku raaxaysato faa'iidooyinka lahaanshaha guri caqli badan oo kontoroolku yahay mid dareen, raaxo leh iyo, wax walba ka sarreeya, oo otomatik ah.
Waa maxay caawiye guri
Si fudud loo dhigo, HA, ama kaaliyaha guriga, waa nidaam guri oo caqli badan oo bilaash ah. Sidey suurtogal u tahay inaan kawada hadalno xalka bilaashka ah? Kani waa software il furan, sidaa darteed qof kasta oo karti u leh wuxuu wax u qaban karaa horumarkiisa. Caawiyaha guriga wuxuu ka shaqeeyaa aagag kaladuwan iyo kombiyuutaro - ugu horayn gudaha, ayadoon loo baahnayn daruur. Boqollaal iyo xitaa kumanaan qalab ayaa isku dhafan HA, si aad si fudud ugu horumarin karto nidaamka gurigaaga caqliga leh adigoo dejinaya alaabooyin gaar loo leeyahay, tusaale ahaan shirkadda Shiinaha ee Xiaomi.
Hagayaashayada waxaan ku soo jeedineynaa sida loogu isticmaalo xalkaan si wax ku ool ah oo hufan iyo waxa la sameeyo si kor loogu qaado suurtagalnimada baahiyahaaga. U baahinta aqoonta ee mawduucan ayaa ah xayndaab dhismo loogu talagalay horumarka fikirka caqliga leh ee guriga. Dhinacyo badan oo laxiriira wali sifiican ugamaqaan Poland.
Xiaomi waa mid ka mid ah shirkadaha loogu mahad naqo taas oo kaaliyaha gurigu uu helo caan caan ah. Gaar ahaan, Xiaomi Aqara waa bilow ay taageerayso soo-saare Shiine ah oo kor u qaadaya tikniyoolajiyadda guryaha smart ee wireless.
Iyada oo qayb ka ah nidaamka wadajirka ah, waad iskudubbaridi kartaa aalado kala duwan, oo ay ka mid yihiin dareemayaal (dareemayaal), websaydhyo, saldhigyo fallaadha, wareejin iftiin, qalabka laydhka, kontaroolada fog iyo waxyaabo kaloo badan.
Muuqaalka nidaamka ayaa sidoo kale waa is waafajin. Xakameynta aaladda Apple HomeKit ee leh qalabka loo yaqaan 'Xiaomi badelo' waa suura gal. Qoraalladayada waxaan ka hadlaynaa mowduucyo badan oo la taaban karo, waxaa sidoo kale jira dib-u-eegisyo ku saabsan xalalka shaqsiyeed. Sidaa daraadeed, waxaan kugula talineynaa inaad si taxaddar leh u aqriso kuna dhiirrigeliso inaad si toos ah noola soo xiriirto haddii aad bilowdo inaad ka fekerto waxyaabaha ku saabsan helitaanka kalkaaliye guri oo saameyn ku leh akhrinta waxyaabaha ku jira.
Abuuritaanka qaybta u hibeeyay kaaliyaha guriga, ma joojin karno dib u eegista iyo tijaabooyinka. Qalabka noocan ah ayaa kaa dhigaya inaad wax ka baratid hal-abuurnimada tikniyoolajiyadeed ee laga heli karo suuqa Polish sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah.
Shaqaalaheenna tifaftirka ayaa u soo dhowaada qodobbada si hab la isku halleyn karo ah, iyagoo soo bandhigaya faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka alaabooyinka. Xiaomi iyo aaladda saddexaad ayaa lagu qiimayn karaa iyada oo loo sii marayo heerar badan oo ay ka mid yihiin sida kontoroolku u eg yahay, kaasoo lagama maarmaan ah inta lagu jiro qaabeynta, in hawlgalku yahay mid dareen leh, oo lagu gaari karo maalgashiga qalabkan.
Haddii aad rajaynayso wadahadal buuxa oo ku saabsan badeecada la soo xulay, si joogto ah u booqo bartayada. Waxaan ku qori karnaa luqad la heli karo oo aan ka horjoogsanayn hor u socod iyo gebi ahaanba bilowga. In kasta oo tikniyoolajiyada la xidhiidha guryaha caqliga leh ay u muuqan karto inay yihiin wax aad u dhib badan, haddana qodobbadayada waxaa lagu soo bandhigayaa qaab la fahmi karo oo dhiirigelin u leh xitaa qof yaqaan.
Sidee loo sameeyaa nidaam kuu gaar ah? Sidee loo habeyn karaa aaladaha abuuri kara Xiaomi Aqara ama deegaan kale? Runtii ma ku xiri kartaa dareemayaasha, kaamirooyinka ama qalabka maalinlaha ah ee guriga smart? Su'aalahan si dabiici ah ayey u kacaan, waxay horseed u noqdaan milicsiga iyo sahaminta.
Taasi waa sababta aan si joogto ah u daabacno tilmaamaha buuxiya himilooyinka akhristayaasha xiiseynaya mawduuca kaaliyaha guriga, oo ay ku jiraan Xiaomi. Hawlo badan oo umuuqda kuwo adag ayaa sida caadiga ah lagu sharixi karaa talaabo talaabo talaabo ah si aad ah loo heli karo oo la fahmi karo, ayadoon loo baahnayn aqoon gaar ah oo horumarsan.
Waxaan ka warqabnaa in helitaanka goobaha Shiinaha ama aaladaha ku saleysan dareemayaasha aan waligood horay loo adeegsan ay yihiin xaalado ubaahan caawinaad bannaanka laga helo. Si loo habeeyo HA, mararka qaarkood waxaad u baahan tahay dulqaad yar iyo il lagu kalsoonaan karo - sida boggayaga internetka.
Apple HomeKit, Kaaliyaha Hoyga, podcast
Qaybta Smart Zone 2 - HomeKit vs Kaaliyaha Guriga
hawada, kaaliyaha guriga, Homekit, Aaga Smart
Maanta waxaan xoogaa yar ka shiraacannay gawaarida korontada si ay ugu gurtaan kalluunka xamuulka ah ee caqliga leh;) Laakiin waxaan sidoo kale wax u haynaa taageerayaasha nidaamka deegaanka! Adigana dhinicii aad tahay HomeKit ama Kaaliyaha Guriga? : D
Kaaliyaha Hoyga, News
Abode Cam 2 - kamaradda amniga miisaaniyadda
hoyga, hoy cam 2, camera amniga
Abode ayaa dhawaan soo saari doonta kamaradeeda cusub ee Cam 2. Qaabkan waxaa lagu gartaa cabir yar iyo qiimo jaban. Kaamirada u eg-kuubku waxay bixisaa hawlo badan oo faa'iido leh. Kuwaas waxaa ka mid ah ogaanshaha ...
BleBox, Kaaliyaha Hoyga, Casharrada, dib u eegista
switchBox laga bilaabo Blebox, oo ah aaladda beddelka nalka Poland
sanduuq dhiig, badhanka v3
Waxaan ka helay 4 qaybood oo tijaabada ah BleBox, shirkad Polish ah oo suuqa ku jirtay 5 sano. SwitchBox ayaa marka ugu horreysa ka muuqan doona dib-u-eegiddayda. Waxaan si xushmad leh kuugu casuumayaa qoraalka! Kahor intaanan u gudbin barta, in kastoo
BleBox, Guriga Google, Kaaliyaha Hoyga, dib u eegista
BleBox shutterBox. Xakamaynta xakamaynta albaabka ee BleBox
9 Febraayo 2021
sanduuq dhiig, Sanduuqa shubka ee Blebox, daahyada, indhoole caqli badan
BleBox shutterBox waa nidaamkii ugu dambeeyay ee xakamaynta xirxiraha ee aan ku rakibo gurigeyga. Maaha markii ugu horreysay ee aan tijaabinayo nidaam noocan oo kale ah, marka dib-u-eegidgan waxaan hubaal ku tilmaami doonaa aalado kale oo aad ka heli doontid suuqa. BleBox ...
Apple HomeKit, BleBox, Kaaliyaha Hoyga, dib u eegista
Blebox airSensor. Dib u eegista dareemaha hawada
sanduuq dhiig, Blebox airSensor, dareeraha tayada hawada, dareeraha hawada
Dhawaan, waxaan ka helay qalab ka kooban Ultrasmart.pl si aan u tijaabiyo, qalabka ugu horreeya ee dib loo eegayna wuxuu noqon doonaa BleBox airSensor, yacni dareeraha tayada hawada. Qiiqa daaqadda dibedda ayaa xitaa isku dayaysa inuu ku soo dhaco gurigeyga, sidaas darteed waan ogahay inay tahay waqtigii loogu talagalay ...
Kaaliyaha Hoyga, dib u eegista, Home smart
Kaameradda Annke l81HC - dib u eegista kamaradda ilaalada wanaagsan
Annke, camera amniga, kamarada banaanka
Haddii aad rabto inaad ilaaliso gurigaaga, xulashada qalabka kormeerka ayaa ah xalka la taaban karo. Qalabka noocaas ah wuxuu noqon karaa, tusaale ahaan, kamaradda Annke L81HC. Waxaan kugu martiqaadayaa dib u eegis iyo ereyo kooban oo kusaabsan isku day kale si aad uhesho kaamil ...
Amazon Alexa, Guriga Google, Kaaliyaha Hoyga, dib u eegista
Tedee Smart Door Lock - Dib u eegista muuqaalka
16 Janaayo 2021
guriga google, Homekit, quful smart, tsdee, quful
Qof walba wuu ogyahay oo jecel yahay Gerda! Maanta waxaan tijaabineynaa furaheeda ugu cusub, smart. Si gaar ah inbadan - Tedee Castle! Sidee u shaqeysay? Hagaag, waxaan dhihi doonaa;)
Apple HomeKit, Guriga Google, Kaaliyaha Hoyga, dib u eegista, Hoyga Xiaomi
Caqara M1S - Ma yahay mid u qalma inuu beddelo Aqara Hub?
Aqar, aqara hub, Aqara m2, iridda, m1s, m2, mi hub v3, Xiaomi albaab v3
Midka koowaad ee labada ujeed ee Aqar waxaan sugaynay bilo badan. Aqara M1S, albaab cusub oo laga furto. Sidee u shaqaysaa? Ma mudan tahay in lagu beddelo Aqara Hub? Waqtiga dib u eegista! Aqara M1S waa toos ...